Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW Matte Black-Handle Mbini-esasazekayo Igumbi lokuhlambela
ikaliwe 4.87 Kwi-5 esekelwe kuyo 23 amanqaku umthengi
Lo mgaqo wokuphetha ufakwe imatte emnyama, enokuthi ikhusele umphezulu kumhlwa kunye nokugqwala.
Isinki yokuhambisa amanzi kunye nedreyini yokuhambisa amanzi equlethwe kwinqwaba. Qiniseka ukuba usebenzisa intengiso yentsimbi yeprimiyamu kwi-Wellbeing yakho
ULawulo lobushushu -Izinto ezibambo-mbini zokulawula ngokulula ubushushu bamanzi kunye nomjelo wamanzi ngqo
Ukuseta ngokuLula-Zonke izinto ezilungiselelwe ukufakwa nazo zibandakanyiwe.
2321300B imiyalelo yokufaka
I-SKU: 2321300B-AMUS iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: 8 intshi, Mnyama, Hlamba
Ndithengile iimpompo zeDelta nePhisher ngaphambili ngexabiso eliphezulu. Imveliso kaWOWOW ingaphezulu kakhulu kunokuba ndikulindele kumgangatho, lula ukufakwa kunye nexabiso lemali yam. Kubukeka kumangalisa kwiindawo zam zokuhlambela ezintsha. Nokuba ukupakishwa kudidi oluphezulu. Ndiyazithanda ii-o-rings ezakhelwe-ngaphakathi emazantsi okuphatha kunye nefom yokuthintela ukuvuza. Umbhobho wokuncamathisela okuguqukayo oza nayo ikwayiplagi kwaye idlale ngaphandle kokuvuza. Andenzi lukhulu lokujonga imveliso kodwa ndonelisekile yile mveliso endicinga ukuba ndingabelana ngayo nawe.
Kutshanje ndiye ndaphinda ndalungisa indawo yokuhlambela ebandakanya ukufaka endaweni yam isitya sokuhlambela esidala kunye nekhabhathi ngesinki esitekiweyo kodwa esisezantsi. Oku kufuna iipompo ezintsha.
Ngenxa yokulungiswa kwakhona, ndandingasenayo isink yokuhlambela esebenzayo. Ke ngoko, kuba bendifuna iipompo ezintsha kwangoko, ndakhangela iivenkile zam zekhaya, kubandakanya iivenkile ezinkulu. Ndamangaliswa kwaye ndaphoxeka kukuba, kungekuphela nje ukuba banokhetho olunqongopheleyo lweepompo zangasese, kodwa zonke zibiza kufutshane okanye ngaphezulu kweedola ezili-100!
Ndithathe isigqibo sokuba ndingahamba ngaphandle kwesinki yokusebenza iintsuku ezimbalwa, kwaye ndaziva ndiqinisekile ukuba ndiza kuba nokukhetha okungcono kunye nexabiso elingcono;
Ndikhawuleze ndafumana iipompo ezininzi endinokukhetha kuzo ngexabiso elisezantsi kakhulu kunokuba bendifumene kwiivenkile zokuphucula ekhaya. Ndazinza kule ndibano yompompo, kwaye andizanga ndonwaba. Iimpompo zine-nickel egqityiweyo entle, kwaye yonke into ibandakanyiwe kufakelo, ngaphandle kwethumbu ezimbini ezingabizi kakhulu ezifunekayo ukunxibelelana nonikezelo lwamanzi. Ndandinomhlobo ondincedayo kulungiswa kwakhona, kwaye ha wafaka iipompo. Nangona kunjalo, ndiqinisekile ukuba ngendiyenzile ngokwam, kuba bekukho iindawo ezimbalwa zokuhlangana, kwaye imiyalelo ebonisiweyo ibithe ngqo-phambili kwaye kulula kakhulu ukuyiqonda nokulandela. Ndithumela umfanekiso wesinki yam entsha ephethe iifompo kwaye ziyasebenza. Ndiyincoma kakhulu le ndibano yokusasazeka kwetephu yegumbi lokuhlambela ngokwenziwa kwayo, ubhedu olusetyenzisiweyo kwimveliso yalo, ubuhle bayo kunye nento endicinga ukuba ibaluleke kakhulu — kulula ukufakwa.
Enye into ebalulekileyo kule ndibano yompompo “kukumisa” kwisinki. Ivala ngokutyhala phantsi kuyo, kwaye ivule ngokutyhala kwakhona. Ndiyakholelwa ukuba olu luphuculo olukhulu kwisitayile esidala sokumisa, esifuna ukuba usebenzise i-lever ukuyivula kwaye uyivale. Mhlawumbi ndim okhethekileyo, kodwa andikaze ndibenalo uhlobo lwakudala olungasebenzi kakuhle. Ngapha koko, uninzi lwamaxesha, ndiye ndizibone sendilahla kwaphela. Ndonwabile nyhani ukuba, into endiyicinga ukuba yiyo, indawo yokumisa ephuculiweyo. Oku kunokubonakala ngathi kukuphucuka okuncinci nokungabalulekanga kwabanye, kodwa kwabo kuthi bajongane neengxaki zohlobo oludala lokumisa, yinto eyamkelekileyo.
Umgangatho olungileyo ngexabiso! Ukugqitywa kubonakala kukuhle kwaye itompu isebenza ngendlela efanelekileyo. Inkonzo yabathengi ilungile, idreyini evelayo ayisebenzi kwisinki yam (imfutshane kakhulu). Ndathumela nge-imeyile umthengisi kwaye ngaphakathi kwemizuzu eli-10 beza ne-resulution. Bafumene idreyini entsha ende kwaye ehambelana nokugqitywa / uyilo lwetephu, emva koko bandithumela ukubuyiselwa imali ukuze ndithenge entsha. idreyini.
Ezi zezona mpompo zibalaseleyo ndizithengileyo, ngakumbi kweli xabiso. Bahle, banesitayile kwaye bajongeka nje mnandi kwigumbi lokuhlambela elisandula ukulungiswa. Ndisebenzise iseti ebiza kakhulu kulungiso oluphezulu kwaye le ijongeka ingcono ngakumbi. Ukunyaniseka, kujongeka kwaye kuyasebenza kunye neMoen okanye iDelta kodwa ingaphezulu kwama-50% ngaphantsi. NDICEBISA kakhulu le mveliso.
Le tephu iyamangalisa! Ngelixa ndenza uhlengahlengiso ndikhethe iipompo ezahlukeneyo kwiCHROME zam zokuhlambela nekhitshi. Ngokwesiqhelo intetho ethi ufumana oko uhlawulayo ihlala ibambekile kodwa hayi kule meko. Ndinezi zinto kwigumbi lokuhlambela ngokusetyenziswa kwemihla ngemihla ngaphezulu kweenyanga ze-6 ngoku kwaye zezona zinto ndizithandayo. Khange ndibenangxaki ngokuvuza, ukuphatha ngokuthambeka, uxinzelelo lwamanzi okanye nasiphi na esinye isikhalazo esiqhelekileyo ngeempompo. Icherry ephezulu nale faucet ayibonisi amabala amanzi. Zonke ezinye iimpompo zam kufuneka zicoceke rhoqo kwiintsuku ezimbalwa ukuqhubeka zikhangeleka zintsha kodwa hayi le. Ndingaya ngoko nangoko kwiiveki ezimbini ezinesiqingatha ndingazisulanga okanye ndizikhuhle kwaye awukwazi nokuxela. Ndiyathandana nezi mpompo. Zikumlinganiso wepompu yam ye-Pfister yexabiso ngokwexabiso lomgangatho kodwa ukuphela kwetheyipu ekhangeleka ilungile ngalo lonke ixesha.
Ndithathe indawo yombhobho wamanzi ophakamileyo wokugqibela. Izinto zokuxhuma ezikhawulezayo zenze ukuba kufakelwe umoya kwaye ndichukumisekile ngumgangatho wokwakha kunye nendlela ebukeka ngayo intle kunale yethu indala. Ndacinga ukuba ndithatha ithuba kwi-brand endandingazange ndiyive ngaphambili kodwa malunga nesiqingatha sexabiso lento endiya kuyihlawula kwivenkile enkulu yebhokisi yezixhobo zokusebenza eli yayilixabiso elingakholekiyo.
Ndikwirenti kwaye andifuni ukuchitha itoni endaweni yeepompo ezimbini ezimbi enkosini yam. Ndonwabile ngakumbi kwezi. Umgangatho uphezulu kwaye ulula kakhulu ukufaka. Njengesiqhelo, kuthatha ixesha elide ukususa ezindala kunokufaka ezitsha… Ngokwesiqhelo uyahlupheka kumgangatho xa ufuna ixabiso. Ixesha liza kuxela, kodwa ukuza kuthi ga ngoku ezi zinto bezimnandi ngemali.
Ndihlala ndisebenzisa iiPompo zoPhawu lwegama eliKhulu kwindawo yethu. Kodwa emva kokubona uphononongo ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame enye.
Uchukunyiswe kakhulu ngumgangatho wetephu, kunye nokulula kokufakwa. Iyunithi iziva yomelele, kwaye yakhiwe kakuhle, kwaye unxibelelwano lwalusongelwe ngaphandle kwentsimbi.
Yithande le faucet !! Umgangatho ophezulu ngexabiso elikhulu. Ukutshekishwa kwaLowe kwaye itepu enye yayiyi- $ 119 enye. Ngokuqinisekileyo ndincoma!
Kwakufuneka ufumane itompu entsha xa usenza uhlengahlengiso oluncinci lokuhlambela. Uthandile ukubukeka okucekeceke kwale seti. Ndiyithengile njengo-MATTE BLACK kwaye bendilindele ithoni engwevu ethe kratya kodwa intle kakhulu. Zonke ezinye izixhobo zentsimbi kwigumbi lokuhlambela zikufutshane nalo mbala ungwevu kodwa ndiyaphila nale. Umlungisi wethu uphawule ukuba kulula kangakanani ukufakelwa. Itheyipu isebenza ngendlela ebifanele ukuba ndonwabile kwaye ixabiso belilungile.
Ezi mpompo ziyilelwe ngumntu owayeyazi into abayenzayo. Banamatywina e-o'ring okanye i-gaskets kwintaba nganye yokuthintela amanzi ukuba angangeni. Ufakelo lulula kakhulu kwaye luyakhawuleza. Izinto ezikumgangatho ophezulu ukuze zingakhange zibonakale zilungile kodwa zingayi kurusa.
Ndizithengile iimpompo zam zangaphambili kwivenkile yehardware yendawo ngendleko eziphezulu kakhulu, kodwa zihlala ngaphantsi kweminyaka emi-3. Emva koko xa ndisiya kuzikhupha ndafumanisa ukuba le nati yayikrwele kwivalve kwaye kwakufuneka ndiyinqumle. Kuyabonakala ukuba kwakungekho tywina lilungileyo lijikeleze isiseko sevalve kwaye inut yenziwe ngezinto ezingabizi kakhulu ezinomhlwa. Kuba yayingaphakathi kwikhabhathi kwaye kunzima ukufikelela kuyo, oku kwathatha iiyure.
Kungenxa yoko le nto ndandonwabe kakhulu xa ndabona indlela le seti eyayenziwe ngayo kunye nohlobo lwezinto abazisebenzisayo xa besakha.
Le tephu ilungile! Thanda indlela ejongeka ngayo, kulula ukuyifaka, umgangatho omkhulu womsebenzi onzima. Akukho minwe. Sasithengisa ngapha nangapha kodwa sasingafuni ukuchitha i-100 yeedola saye sazinika ithuba kwaye savuya kakhulu. Awuyi kudana.
Ndithathe indawo yam yamandulo ephelelwe lixesha ngale nto. Ndonwabile kakhulu! Ijongeka intle kwaye kwakulula kakhulu ukuzifaka ngokwam !! Ndiceba ukuthenga ezinye ezimbini ukubuyisela ezinye iipompo ezindala.
Sitshintsha iipompo zangasese ezintlanu ezixabisa ngokuphindwe kabini kunale. Ezi zinomtsalane kakhulu, kulula kakhulu ukuzifaka kwaye zenziwe kakuhle. Ekuphela kwento endinokuyithetha kukuba nakanjani na kukuthintela into kukuba imiyalelo kufuneka ikuxelele ukuba uthenge isityikitya semibhobho oza kuyisebenzisa kwimisonto yokuhambisa umbhobho. Umbhobho wokuhambisa amanzi uyilelwe ukuntywila ngomngxunya ophuphumayo ngoko ke kukho imingxunya kwicala elingaphantsi kwesimisi, phakathi kwenati kunye negasket ezantsi. Imisonto inyani kakhulu kwaye ndafumanisa ukuba amanzi xa ehambisa amanzi aza kuphuma kwimingxunya yokugcwala kwaye athontsize imisonto kunye nenutini ebambe umbhobho wokuhambisa amanzi. Kulungiswe ngokulula ngokusayina umsonto. Uyalelwe ukuba usebenzise i-plumbers putty apho idreyini idibana nomphezulu wesinki, kodwa ayingomthombo wokuvuza oko. Fumana umsonto wokutywina. IMO, awunakuhamba gwenxa ngale faucet ngexabiso!
Kwakungekho kuphela amaxabiso asezantsi kakhulu kule mpompo ibalaseleyo, kwakulula kakhulu ukuyifaka. Umbhobho ophuma phezulu ubalasele. Ndilindele ukuba le faucet ihlale iminyaka. Impompo enokuthelekiswa njengale evela kwitena nodaka enkulu ingabiza amaxesha ama-3 ngaphezulu kwale faucet. Ndikucebisa kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo ndiza kuthenga kwakhona.
Ndithenge le nto endaweni ye-25 yeminyaka ubudala. Ukufakelwa kwakuyimpepho kwanomfaki we-DIY we-novice njengam. Elona candelo lalinzima kukususwa kombhobho omdala onomhlwa. Izihlanganisi ezibonelelweyo ezilula zenze ukuba ufakelo lube yinto engenabuhlungu. Esona sikhalazo kukuba itompu yenziwe ngezinto ezinobunzima bokukhanya xa ithelekiswa nompompo omdala owawuthathe indawo yawo. Imveliso egqityiweyo ijongeka ngathi intle kwaye inobuhle, nangona kunjalo.
Kufakwe ebhafini kunqabile ukuba isetyenziswe ukuze ungabinamava obomi ngayo kodwa iphakheji igqityiwe ngayo yonke into oyifunayo kwaye isebenza kakuhle, ijongeka intle. Isimamva sisixhobo sokuvala isixhobo endaweni yentonga yesiqhelo yokuphakamisa nokuthoba isivalo. Andiyithandi loo nto kodwa inyani ilula kwaye ine-strainer kuyo ke ukuba ulahla into edreyini unokutsala yonke indibano yokumisa ngaphandle kwaye uyibuyise. Oko kusenokwenzeka ukuba kungaphezulu kokudityaniswa kunokubi kokungabinayo intonga yokuvula / yokuvala isivalo.
Le faucet ibukeka kwaye isebenza kakuhle kwigumbi lethu lokuhlambela. Ukufakwa kwakulula ngento enye ukuba uyiqaphele. Ithumbu elikhawulezayo lokudibanisa eliza nompompo kufuneka lihlale liqinile xa lifakelwe. Ndacinga ukuba ndizidibanisile kulungile kodwa xa amanzi evuliwe kwaye itompo ivuliwe, aqhawuka omabini. Ukulungiswa okulula, khumbula nje ukutyhala ngokuqinileyo xa unamathela kwiithumbu.
Ndandinomcimbi omncinci kunye ne-aerator kumbhobho kwaye ndafumana inkonzo ye-WOWOW yabathengi ukuba ikhawuleze kwaye iphendule. Inkampani enkulu, inokucebisa ngokuqinisekileyo le faucet.
Ndiyifumene le kwaye ndayifaka. Kwakulula kakhulu ukufaka, ukupakisha okugqwesileyo kunye nexabiso elifanelekileyo kakhulu le-fir. Ndizifundile uninzi lokuphononongwa ngaphambi kokuba ndithenge kwaye ndingenzi ngqondo. Ukuza kuthi ga ngoku akukho kuvuza kwaye kujongeka kukuhle. Ukuba kukho nantoni na eya kutshintshwa ndiya kubhala kwakhona ukuhlaziywa kwam. Kwaye kanye, kamsinya nje emva kokuba ndifumene imveliso ndafumana i-imeyile kumthengisi. Yathi ukuba ikhona imicimbi konke konke kufuneka ndinxibelelane nabo ngqo. Njengoko benditshilo ukuza kuthi ga ngoku. Khumbula ukuba lixabiso elifanelekileyo lemali.
Siyayithanda le faucet. Iqhosha lokucofa iqhosha lokucofa lihle kakhulu. Izibambo zijika ngokugudileyo kwaye amanzi ahamba kakhulu. Ndiyithengile ukulungiselela ukulungiswa kwakhona kwendawo yokuhlambela endiyenzayo kwaye ndandikhathazekile ngokuthenga into enjalo kwi-intanethi ngaphandle kokuyibona. Igqithile into ebendiyilindele. Enkosi ngemveliso entle kunye namava amnandi ngoku kuthengwa.
Iimpompo zigqityiwe kakuhle kwaye zipakishwe kakuhle. I-spigot yenzelwe indawo elungileyo kwindawo yokuntywila. Ukuqokelela kunye nokufakwa phantsi kweepompo kunye ne-spigot kucingelwa kakuhle ukuthintela ukungena kwamanzi. Izinto ezisetyenzisiweyo zibonakala zikumgangatho ophezulu. I-pop up drain kunye ne-tailpiece, ngelixa ingomelelanga njengokutshintshwa, ingaphezulu kokwaneleyo. Ukufakwa bekungekho nzima kwaye kubandakanya iihardware zonke zazikho. Ukupakisha kugqwesile ngombhobho ngamnye kunye ne-spigot nganye ebhegiweyo ngokodwa ukukrwela ekuhambeni akuzange kwenzeke.
Eyona mveliso intle ngokwenene yayiseDepho yasekhaya kwaye andifumananga nenye ndiyithandayo kwaye ndiyifumene kwiWOWOW ngeedola ezingama-20 ezingaphantsi. Ukunyanzelwa kwakulula kakhulu kwaye ndifake iisinki ezimbalwa kule minyaka kwaye le yayiyeyona ilula. Yonke into ndiziva yomelele kakhulu, ndiyithandile loo dreyini iza nayo yona ibhetele kakhulu kunaleyo itsalelayo emva kwetephu. Ndingayifumana enye xa ndilungisa enye indlu yangasese
Ndithenge le nto endaweni ye-faucet yam ebisele ivuza. Kwakulula ukuyifaka. Kundithathe malunga nesiqingatha seyure ukukhupha itompu endala kunye nemizuzu engama-20 ukuyifaka le intsha. Kuza kunye ne-pop up drain, endiyithandayo kakhulu. Zibukeka zintle. Andiqinisekanga ukuba bazokuhlala ixesha elingakanani, kodwa ndonwabile ngokuthengwa okwangoku.